လက္ကား Golf Products, Golf Supplies ထုတ်လုပ်သူ | Shenzhen Feyond Sports Co. , Ltd.
Feyond Sports သည်မတူညီသောဂေါက်သီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
GOLF FEYOND, ဘယ်တော့မှရပ်တန့်
FEYOND SPORTS သည် GOLF ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်အုပ်စုများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
HighQuality ဂေါက်သီးအလေ့အကျင့် Net Wholesale chipping- 深圳市飞羊运动用品有限公司
Feyond Golf Practice Net သည်အဆင့်တိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 1. မိုးရွာနေတယ် ဂေါက်ကွင်းကိုမသုံးနိုင်ဘူး ဤအချိန်တွင်သင်ထားလိုသည့်နေရာတိုင်း၌ဤဂေါက်သီးလှောင်အိမ်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ဂေါက်သီးစွမ်းရည်ကိုလွတ်လပ်စွာလေ့ကျင့်ပါ ဤဂေါက်သီးလှောင်အိမ်သည်တဲ၏ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်သည်။ သင်အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောအခါ၎င်းသည်သင့်ကိုအထူးခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသောအောက်စဖို့ဒ်အထည်သည်ဤဂေါက်သီးလှောင်အိမ်ကိုကြာရှည်စွာခံနိုင်စေရန်လုံလောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည် မကျင့်သုံးမီ၊ ဤဂေါက်သီးပိုက်ကွန်ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့နောက်သင်အလိုရှိသည့်သင်လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူများစုစည်းရန်၎င်းကိုအလွယ်တကူခွဲထုတ်နိုင်သည် 5. အနားယူခြင်း၊ ဖျော်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောအခါဤဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းသည်အဖော်ကောင်းဖြစ်သည်။ 6. သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးလှံတံကိုလှန်လှောကြည့်ပြီးဘောလုံးကိုဂူဂေါက်လှောင်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီး smoggy၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂေါက်သီးခရီးစဉ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ၇။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း - ဂေါက်ကွင်းသည်အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်တပ်ဆင်။ ၂ မိနစ်အတွင်းတည်ဆောက်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၈. အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်း - ဂေါက်သီးပိုက်ကွန်တစ်ခုစီသည်သင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်နှင့်လွယ်ကူစွာကောက်ယူရန်တာရှည်ခံသောအိတ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အမျိုးအစား: အိတ်များ ကွက်ပစ္စည်း: အောက်စ်ဖို့အထည် ပံ့ပိုးမှုလှံတံပစ္စည်း: ဖန်မျှင်ထည် အရောင်: အနက်ရောင်၊ အစိမ်းရောင် အရွယ်အစား: 200x100x140cm / 78.74x39.37x55.12 ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: 50x25x10cm / 19.69x9.84x3.94 အခါသမယ: အတွင်းပိုင်း, အပြင်ဘက် အဓိကအကြောင်းအရာ - အားကစား အားကစားအမျိုးအစား: ဂေါက်သီး MOQ: 1pcs ထုပ်ခြင်း: 1pcs / အိတ်သယ်
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဂေါက်သီးလေဆာ Rangefinder လိုအပ်ပါတယ်? သင်အသစ်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်တိုင်းတာရန်အခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုမှာအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ နှင့် "အဟောင်းကိုလိုလားသူ" နှင့်အတူပြhasနာများသောအရာတစျခုအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာအကွာအဝေးကိုခန့်မှန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာအခက်အခဲရှိသည်။ 200yards အတွင်းရှိ± ၀.၃ ကိုက်အထိသာလွန်သောတိကျမှန်ကန်မှုရှိပြီး Feyond rangefinders များသာစျေးကွက်တွင်ဤမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတွေ့နိုင်သည်။ တိကျမှန်ကန်မှုမှ± ၆.၅၅ ကိုက်မှ 200-660yards မှ; ကိုက်သို့မဟုတ်မီတာတိုင်းတာမှုများ၊ mode များစွာ (flagpole scanning mode, golf slope adjust, speed speed) ပေါ့ပါး။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစား (အိတ်ထဲတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်) - အိတ်ဆောင်အရွယ်အစား (၁၁၀ * ၆၅ * ၃၈ မီလီမီတာ)၊ ပေါ့ပါးသော (164g) other အခြားအကွာအဝေးမီတာများထက်ပိုမိုသေးငယ်ပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ ကြာရှည်ခံ CR2 3V လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင်ပါဝင်သည်။ ၈ စက္ကန့်အကြာတွင်အဆ ၅၀၀၀ အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်သွားသည်။ Ergonomic၊ ပျော့ပျောင်းသော casing ဒီဇိုင်း (ABS + PP), အခြားသူများမှာ PP သာဖြစ်သည်။ ဂေါက်သီးရိုက်စက်သည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ HD ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော focal length အထိအလင်းအားဖြင့် ၆x ချဲ့ခြင်း၊ တောက်ပသော၊ resolution မြင့်မားသော monocular; ရေနှင့်ဖားဒဏ်ခံနိုင်မှု။ ပို၍ တိကျမှန်ကန်မှုရှိလျှင်ဂေါက်သီးတောင်စောင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်အတူဂေါက်သီးအနိမ့်ဆုံးဂေါက်သီးရှာဖွေစက်မှတောင်နှင့်ကုန်းမြင့်အကွာအဝေးကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်သည်။ ညာဘက်ကလပ်ကို ရွေးချယ်၍ ဘောလုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာထိတွေ့နိုင်စေရန်အကွာအဝေးကိုနှိပ်ပါ။ အဆင့်မြင့်အလံရှာဖွေမှုနည်းပညာသည်သင့်အားအလံရိုက်ရန်သေချာသည့်နောက်ခံအရာများ (အကိုင်းအခက်များနှင့်မြက်များ) မှ flagpole ကိုစစ်ထုတ်သည်။ ပထမရည်မှန်းချက် ဦး စားပေးသည်တုန်ခါမှုကဲ့သို့ဒုတိယညွှန်ပြချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲရရှိသောတိုင်းတာမှုအမျိုးမျိုးအကြားတွင်ပထမ / အနီးဆုံးပစ်မှတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ အခြားဂေါက်သီးအကွက်ဆင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်လဲလှယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ CR2 3V လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင်ပါ ၀ င်ပြီးအနည်းဆုံးအဆ ၃၀၀၀ အထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး ၈ စက္ကန့်အကြာတွင်အလိုအလျောက်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကြာရှည်ခံသောခိုင်ခံ့သော Hardchell သည်ပျော့ပျောင်းသောအလွှာဖြင့်လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်သောဇစ်ပါရှိသည်။ ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ အကွာအဝေးရှာဖွေသူအားထိခိုက်မှုနှင့်ကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့်အပြင်ဂေါက်သီးအိတ်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲရန်ကြိုးပါသည့်သိုင်းကြိုးနှင့်သတ္တုညှပ်များပါ ၀ င်သောရေစိုခံဂေါက်သီး၊ အမဲလိုက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ သင်၏အကွာအဝေးရှာဖွေစက်ကိုသင်၏ဂေါက်သီးအိတ်မပါဘဲသယ်ဆောင်လိုပါကခါးပတ်ကြိုးပါဝင်သည်။ Mini Golf Rangefinder ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အကျယ်: 600m အရောင်: (အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အပြာ၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင်) ဘက်ထရီအမျိုးအစား: 3V, CR2 * 1 ယူနစ်: M / YD တိကျမှန်ကန်မှု: ± 0.5m လေဆာအမျိုးအစား: 905nm မျက်လုံးလုံခြုံမှု - FDA (CFR 21) လယ်ကွင်းမြင်ကွင်း - ၇ ° ချဲ့: 6X Objective len အချင်း - ၂၂ မီလီမီတာ မျက်လုံးအပိုင်းအစအချင်း - ၁၆ မီလီမီတာ ကျောင်းသားမှထွက်သောအချင်း - ၃.၇ မီလီမီတာ Diopter: ± 5D Diopter ညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်း - မျက်မှန်ညှိခြင်း လည်ပတ်မှုအပူချိန်:0° c- + 40 ° c Display: LCD အရွယ်အစား - ၁၁၀ * ၆၅ * ၃၈ မီလီမီတာ ဘက်ထရီမပါဘဲအလေးချိန် (ဆ) - ၁၆၄ ဂရမ် MOQ: 1 set ကို
ဂေါက်သီးရိုက်အစိမ်းရောင်အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်ဂေါက်သီးအစိမ်းရောင်လက်ကားအရောင်းဆိုင် - 市飞飞羊运动用品有限公司
ဤမမှန်သည့် Feyond ဂေါက်သီးစိမ်းပွင့်ဖျာသည်ဂေါက်သီးရိုက်အစစ်အမှန်ကိုတုပသည့်အတွက်အိမ်တွင်ဂေါက်သီးကစားခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဂေါက်သီးကစားခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ သင်လည်းလေ့ကျင့်နိုင်သည်, အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောများအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်! ရုံး၊ ရုံး၊ ကားဂိုဒေါင်၊ အလုပ်သို့မဟုတ်အိမ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသောဤအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ Putting Greens သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင်၏တိုတောင်းသောဂိမ်းကိုလေ့ကျင့်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ကျသောအစိမ်းရောင်များကဲ့သို့ခံစားရန်နှင့်ပြုမူရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသော Premium Turf မျက်နှာပြင်သည် မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ofာန်ကိုမဆိုစိမ်းလန်းစိုပြေအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းကိုလှိမ့်ပြီးစုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်၎င်းကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ အရမ်းအဆင်ပြေလည်းအာကာသသိမ်းပိုက်မည်မဟုတ်! ဂေါက်သီးသည်သည်းခံခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်း၏ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးသမားများသည်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေသည့်နာရီတိုင်းသူတို့၏လွှဲ၊ ချဉ်းကပ်နည်းကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အမှုအရာများမသွားသောအခါထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုလေ့လာနေကြသည်။ သင်၏ဂိမ်းကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက်ဂေါက်ကွင်းတွင်သို့မဟုတ်ကားမောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အိမ်နောက်ဖေးဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အစိမ်းရောင်အခြေအနေများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်အကောင်းဆုံးချပ်ဖျာများ၏အဆင်ပြေချောမွေ့မှုဖြင့်အိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကဂေါက်သီးကစားရုံမဟုတ်ဘဲတစွန်းမှအပေါက်များနှင့်အတူ၊ သူတို့သည်စစ်မှန်။ အသုံး ၀ င်သည့်အပြင်များစွာသောသင့်အားအနည်းငယ်ပိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေရန်ဖျာများကိုချခြင်းဖြစ်သည်။ ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအစရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အမျိုးအစား: အစိမ်းရောင်ထည့်ခြင်း အရောင်: အစိမ်းရောင် Package တွင်ပါဝင်သည် - 1Pcs / set MOQ: 1pcs ပစ္စည်း: PP + PE မြက်ဘဝ - ၆-၁၀ နှစ်
Professional ကဂေါက်သီး Divot tool ကိုထုတ်လုပ်သူ
၎င်းသည်စိမ်းလန်းသောပြုပြင်ခြင်းကိုပေါ့ပါးစေသည့်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဂေါက်သီးကစားသူများသည်ဂေါက်ကွင်းတွင်ကွဲပြားသောကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်သင့်သည်၊ သို့မှသာသူတို့မြင်တွေ့ရသောမည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆိုပြင်ဆင်နိုင်မည်၊ လူတိုင်းအတွက်အခြေအနေ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် သင်ကိုယ်တိုင်ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပေးလိုလျှင်၎င်းသည် switchblade divot tool ထက်ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်သတ္တုတံစဉ်နှစ်ခုရှိပြီး switchblade ကဲ့သို့၎င်း၏အဖုံးမှထွက်လာသော။ တံစဉ်များကိုဂေါက်ကွင်းပေါ်ရှိလှောင်အိမ်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ များသောအားဖြင့်ဂေါက်သီးသမားများသည်သူတို့၏ကလပ်များနှင့်မြက်ပင်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိမ်းလန်းသောစိမ်းလန်းစိုပြည်သောဂေါက်သီးဘောလုံးများကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၏ prongs switchblade divot tool သည်အမှတ်အသား၏အပြင်ဘက်အစွန်ရှိ Turf ထဲသို့ထည့်သည်။ ထို့နောက်အနားကိုဂရုတစိုက် ပြန်၍ ဗဟိုဆီသို့ ဦး တည်။ ကွာဟမှုကိုပိတ်လိုက်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် အမှတ်အသားကိုမြက်အမြစ်မှနောက်ထပ်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ ပစ္စည်း: သံမဏိ + သွပ်သတ္တုစပ် / လူမီနီယမ် / ပလပ်စတစ် အရွယ်အစား: ၃ * ၁၂ စင်တီမီတာ (မတွေ့ရှိရ) အလေးချိန် - ၄၇ ဂရမ် MOQ: 10 လိုဂို: စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်
Shenzhen Feyond Sports Co. , Ltd.
Shenzhen Feyond Sports Co. , Ltd. သည် ၁၉၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောစက်ရုံcoveringရိယာအကျယ်အ ၀ န်းအားဖြင့်ဂေါက်သီးထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားဂေါက်သီးသုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းလုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်တွင်တည်ရှိပြီးဂေါက်သီးအမျိုးမျိုးဖြင့်သုံးစွဲသူအုပ်စုများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေါက်သီးနှင့်အမျိုးမျိုးသောဂေါက်သီးအမျိုးမျိုး၊ အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်၊ ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူများ၊
အားကစားကိုကျော်ပြီးအားကစား "Feyond golf, Never stop" ဟူသောအတွေးအခေါ်ကိုအလေးအနက်ထားရမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်များကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးစွာသောစီးပွားရေးကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အဖြစ်အပျက် -၂ နောက်ပိုင်း
အမှု -၂ ။ ဤ Hitting လှောင်အိမ်သည်တရုတ်ဂေါက်ကွင်းအတွက်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အိမ်တွင်ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ရှိကြသည်။ ဂေါက်သီးရိုက်သည့်လှောင်အိမ်သည်များသောအားဖြင့် ၃x3x3m ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အရွယ်အစားကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လူအများစုကဤအရွယ်အစားကိုသုံးကြသည်၊ ပစ်မှတ်အထည်တစ်ခုရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ဒီဇိုင်း (သို့) လိုဂိုကိုပစ်မှတ်အထည်မှာလုပ်နိုင်တယ်။ ဂေါက်သီးရိုက်နှိပ်ရုံသာမကဂေါက်သီးဖျာလုပ်တယ်။ vedio ကနေမြင်နိုင်တယ်။ 1.5x1.5m.we အခြားဂေါက်သီးဖျာများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အခြားထုတ်ကုန်များစာရင်းမှကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့လည်းဂေါက်သီးဘောလုံး၊ ဂေါက်သီးရော်ဘာတီဗီ၊ ဂေါက်ကလပ်တို့ကိုအတူတကွထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှဂေါက်သီးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံလုပ်, အချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမဝါယမပေးကြသည်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကောင်းစွာအစေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဂေါက်သီးအသားတင် Case1 နှိပ်
ပြ.နာများ ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းပိုက်ကိုအမေရိကန်ဖောက်သည်များအတွက်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါဈေးကွက်ကိုရောင်းသည်။ ရောင်းအားကောင်းသည်။ အစုတစ်ခုလုံးသည်လှောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ပစ်မှတ်အထည်ပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်လိုဂို, ဂေါက်သီးဖျာ, ဂေါက်သီးဘောလုံး, ဂေါက်သီးရော်ဘာ Tee, လက်စွဲနှင့်အားလုံးထုပ်ပိုးရန်နိုင်လွန်အိတ်ရှိသည်။ သင်ကသင်၏ဥယျာဉ်၌သို့မဟုတ်ကလပ်သင်တန်းအတွက်သုံးနိုင်သည်အိမ်မှာကစားသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု၊ သင်၌ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိပါကဤဒီဇိုင်းကိုနှိပ်သောလှောင်အိမ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်: လှောင်အိမ်အရွယ်အစား: 2.2x3m ကေ့စ်ပစ္စည်း - Polyester ပစ်မှတ်အထည်အရွယ်အစား: 1.5x1.5m ပစ်မှတ်အထည်ပစ္စည်း - နိုင်လွန် ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း - အလွှာ ၂ ခုအထိဂေါက်သီးတစ်လုံးလျှင် ၃ လုံး၊ အရောင် ၃ ရောင် (အဖြူ၊ အပြာ၊ အနီရောင်) ဂေါက်သီးဖြင့်ပြုလုပ်သောရာဘာ - တစ်စုံလျှင် ၃ ပြား (အဖြူ၊ အပြာ၊ အနီ) အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၁ ပြားပါနိုင်လွန်အိတ်၊ ၁ လက်စွဲလက်စွဲ MOQ： 500 အစုံ ဦး ဆောင်အချိန် - ရက်ပေါင်း ၃၀-၄၀